Somaliland: Dhul-beereed Aan Laga Faa’iidaysan Iyo Xukuumad Aan U Soo Jeedin – Oodweyne Online
QALINKII: CABDILAHI BUDUL
Hargeysa, Somaliland – Beeraralayd reer Somaliland ku dhaqan deegaanada beeraha ku fiican gaar ahaan beeraha laga beero hadhuudhka iyo galayda, ayaan gebi ahaanba wax soo saar muuqda oo mug leh soo saarin, isla markaana xili roobaadka wax soo saarka yar ee uga soo go’a beeraha ay suuqa ka saaraan hadhuudh iyo galay ay keenaan hay’adaha qaarkood.
Beeralayda reer Somaliland ayaa sidoo kale aan dhiiri galin iyo qalab ay kaga hawlgalaan wax soo saarka sidii ay u kordhin lahaayeen ka helin xukuumada iyo ganacsatada Somaliland.
Dhul beeraadka dalka ayaa deegaano faro badan oo ka mid ah aan waxba laga soo saarin, isla markaana bulshada deegaanadaasi ay u baahan yihiin qalabka beeraha ee kala duwan oo wax soo saarka ka qayb qaadan lahaa beeralayda laftooda ka dhigay fadhiid aan wax soo saarka beeraha aan ku talaabsan.
Waxaana looga baahan yahay beeralaydu inay dadaal sameeyaan inta taagtooda ah ay kordhiyaan tacabka beeraha, waxaana sidoo kale looga baahan yahay xukuumada inay kaalinteeda ka qaadato dhiiri galinta wax soo saarka beeraha, isla markaana beeralayda ka taageerto qalabka iyo agabka kala duwan ee wax soo saarka beeraha.
Sidoo kalena ganacsatada Somaliland ayaa looga baahan yahay inay qaybtooda ka ciyaaraan sidii ay beeralayda uga gacan qaban lahaayeen wax soo saarka beeraha.
Xilligan oo wakhtigii xilli roobaadka la sugayo ayaa beeralayda ay tahay inay ka faa’iidaystaan xiili roobaadka gu’ga ee inagu soo fool leh.
Dhinaca kale biyaha ka soo rogmada dooxyada xilli roobaadka oo loo baahan yahay in laga faa’iidaysto ayaan dawladihii kala dambeeyay ee Somaliland soo mara u samayn qorshe lagaga faa’iidaysanayo biyaha ka soo rogmada roobabka oo dooxyadu ku daraan bada.
Xukuumada madaxweyn Siilaanyo ayaa balan qaaday in deegaanada dalka ay ka hirgelin doonaan biyo xidhiino iyo dhaaman ay duunyada iyo ummadu kaga samato baxaan xilliyada abaaraha iyo jiilaalada daba dheeraada, taas oon waxba laga fulin oo noqday hal bacaad lagu lisay.